Rivo-doza “AVA”: Tapaka ny lalana, miakatra sahady ny vidim-bary | déliremadagascar
Rivo-doza “AVA”: Tapaka ny lalana, miakatra sahady ny vidim-bary
Socio-eco	 10 janvier 2018 lynda
Tondraka ny rano, potika ny voly. Tapaka ny lalana, mikatso ny fitaterana. Noho ny voka-dratsy nateraky ny rivo-doza “AVA”, manomboka sahady ny fiakaran’ny vidim-bary. Maro amin’ireo mpivaro-bary no efa mampiakatra ny vidim-bary na dia efa entana tahiry aza. Manodidina ny 100 Ariary eo izany fiakarana izany ho an’Antananarivo. Tokony handray fepetra haingana dia haingana ny sampana mpanara-maso eo anivon’ny ministeran’ny Varotra sy ny Fanjifana mba hisorohana ny fananaraotana mihoa-pampanana.
Tapaka ny lalam-pirenena faha-44 mampitohy an’i Moramanga an’Ambatondrazaka, ny RN34 mampitohy an’i Mandoto sy Antsirabe, lalana ao Miandrivazo… Tsy afa-manoatra ireo mpampiasa ny lalana. Mikatso ny fitaterana ireo vokatra. Niteraka fahatapahan’ny lalana ihany koa ny tetezana lasan’ny rano. Lasibatra tamin’izany ny tetezana ao Vohiposa izay vao vita vao haingana.
Noho ny fiakaran’ny rano be loatra, fefiloha maro no vaky toy ny fefiloha eny Andohatanjona Itaosy. Vokatr’izany, dibo-drano avokoa ny ankamaroan’ireo tanimboly sy tanimbary manodidina.
Tranga fahita isan-taona eto Madagasikara ny rivo-doza. Namela takaitra ny rivo-doza “AVA” tamin’ity fiandohan’ny taona 2018 ity. Araka ny antontan’isa avy any amin’ny BNGRC, 80.000 ny isan’ny traboina.
Hatreto mbola tsy ampy fiomanana ny fitondram-panjakana amin’ny fiatrehana ny loza voajanahary. Mihanona amin’ny fizarana kojakoja mandalo fotsiny ihany izany.